Halatra volabe tao amin’ny Praiminisitra : Olona roa nofonjaina eny Tsiafahy, efatra eny Antanimora – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → avril → 25 → Halatra volabe tao amin’ny Praiminisitra : Olona roa nofonjaina eny Tsiafahy, efatra eny Antanimora
Halatra volabe tao amin’ny Praiminisitra : Olona roa nofonjaina eny Tsiafahy, efatra eny Antanimora
Redaction Midi Madagasikara 25 avril 2018 8 Commentaires
Taorian’ireny resaka fahaverezana vola be tao an-tranon’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier andro vitsy lasa izay, dia fantatra izao fa nisy tokoa ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro ny filaminana momba izany. Olona enina voarohirohy amin’ity raharaha ity no natolotra ny Fampanoavana, omaly alatsinainy 24 aprily. Tao aorian’ny fihainon’ny mpitsara azy ireo, dia lehilahy roa no nampidirina vonjimaika eny amin’ny toeram-pamonjana ireo mpanao heloka bevava eny Tsiafahy. Efatra kosa, izay vehivavy ny roa, no nampidirina eny amin’ny fonjaben’Antanimora. Araka ny nambara tetsy ambony, dia halatra vola be no nanenjehana ireo olona ireo, saingy mbola tsy fantatra hatreto ny hoe : inona avy no andraikitra noraisin’ny tsirairay tamin’izy ireo tao anatin’izany ? Mbola mipetraka ho tsiambaratelo izany, satria toa mailo dia mailo ny mpanao fanadihadiana avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena misahana ity raharaha ity ; amin’ny fanomezam-baovao mahakasika ity raharaha ity. Na izany aza anefa, nisy ihany ny loharanom-baovao nilaza, fa iray amin’ireo olona voarohirohy ireo no tsy lavitra an’ilay niharan’ny fandrobana. Ity olona ity no fantatra fa voasambotra voalohany ary nahatrarana vola be amina miliara tany aminy. Andrasana araka izany ny tatitra izay omen’ny zandary mahakasika izao raharaha izao, fa zava-dehibe loatra ho an’ny Malagasy ny mahalala izany. Ilaina ny hisian’izany, satria araka ny feo mandeha dia vola ampolony miliara ity voalaza fa very tao an-tranon’ny Praiminisitra ity. Ity farany izay nilaza fa tsy marina io resaka io raha nanontanian’ny mpanao gazety momba izany. Voaporofo anefa ankehitriny fa nisy tokoa ilay izy matoa nisy ny olona nenjehina momba izany. Ny mampametra-panontaniana ny maro dia ny nahafahan’ny Praiminisitra mitahiry izany vola be izany any an-tranony sy ny fiavian’izany ary ny saika hampiasana azy.
ndriam 18 mai 2018 at 20 h 58 min · Edit
efa tsisy ipetrahanizany vola beuh izany itsony nga any am banky
Nandra_san a 26 avril 2018 at 13 h 43 min · Edit
anjaran’ny 73 députés zany reo vola reo ko
RVN 25 avril 2018 at 22 h 42 min · Edit
Volam-mpanjakana io ka aoka hanolo izay manary.
Dia mbola nisy anizany vola miliara maromaro izany koa tao aminy rehefa avy nandoa 50millions ariary isaky ny député miisa 79 izy? Ny ampitsony fizarana vola tao @ paon d’or ivato mantsy io vola nolazaina fa 12milliards io no hoe very tao antranony.
Raha atao ny compte de raha enao hoe vola avy aiza ho an’iza atao inona si antranano sa dia efa niitady ka nahita loza, sady very vola no maty henjika.
Zenzolu 25 avril 2018 at 12 h 38 min · Edit
Hazavao ny momba ilay vola Solo a ! Aza misalasala milaza ny marina fa aza afenina, araka ilay filamatra moa e !
Namana 25 avril 2018 at 10 h 51 min · Edit
Efa maro ireo afera maloto nahitàna hatrany ny anarana Solonandrasana.
Tsy mbola nisy mihitsy fakàna am-bavany azy fa dia lasa rano daholo.
Tsara sy mendrika ny hetsika ataon’ny 13 Mai ka tsy fotsiny hoe : Misy miala ao Iavoloha ihany fa koa
Misy Volera ao Mazorivo, TETITETEO FA RATSY FANAHY.
Lala Jacquot 25 avril 2018 at 9 h 47 min · Edit
Izao izany tratra ireo izay ahiana fa nangalatra .. Ny tokony tsy ho adino koa dia ny fanaovana fanadiahadiana ny Praiminisitra an’iza ilay vola ? fa ahoana no any an-trano fa tsy any amin’ny banky ? sns… satria dia tena mampiaiahy be ihany ilay fitrangan-javatra.
mr 25 avril 2018 at 9 h 36 min · Edit
Raha ny hita eto aloha dia ankoatr’ity raharaha mavesatra ity, dia mbola eo koa ny raharaha Claudine izay mahavoatonotonona anaran’olona ambony iray, toa sarotsaronana ihany. Fa inoana fa dia hivoaka amin’izay izany amin’ity tolom-bahoaka ity ! …tena mafana leireto a !
bemaso 25 avril 2018 at 8 h 17 min · Edit
Ny mampametra-panontaniana ny maro dia ny nahafahan’ny Praiminisitra mitahiry izany vola be izany any an-tranony sy ny fiavian’izany ary ny saika hampiasana azy.